आँचल शर्मा र नाजिर हुसेन अभिनित गीत ‘तोरी पेली तेल’को कभर भिडियो बनाउनेलाई पुरस्कार भिडियो हेर्नुहोस ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारआँचल शर्मा र नाजिर हुसेन अभिनित गीत ‘तोरी पेली तेल’को कभर भिडियो बनाउनेलाई पुरस्कार भिडियो हेर्नुहोस !
अस्मिता अधिकारी र प्रनय क्याडीले गाएको गीत हो, ‘तोरी पेली तेल’ सार्वजनिक भएको छोटो समयमै चर्चामा आएको यो गीतमा दीपक शर्माको शब्द संगीत सुन्न सकिन्छ । अब यो गीतको कभर भिडियो बनाउनेलाई राम्रो अवसर छ । आँचल शर्मा र नाजिर हुसेन अभिनित गीतको कभर भिडियो बनाउने एक जनालाई डेढ लाख पुरस्कार दिइने भएको छ ।
कभर भिडियो बनाउने मध्येबाट उत्कृष्ठ एकजनालाई १ लाख ५० हजार सहित सम्मान गर्ने घोषणा तोरी पेली तेल युनिटले गरेको हो ।क्याडी इन्टरटेन्मेन्ट सार्वजनिक गरेको यो अफर अन्तरगत उत्कृष्ट कभर भिडियो बनाउने १ जनाले म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने अवसर समेत पाउने छन् । डान्सिङ शैलीको यो गीतको म्युजिक भिडियो निकेश खड्काले निर्देशन गरेका हुन् ।
January 2, 2021 admin समाचार 1550
काठमाडौं– वर्षौदेखि पशुपतिमा लास व्यवस्थापनको सेवामा लागेर चर्चामा आएका विनयजंग बस्नेत र पत्रकारबीच शनिबार राजधानीको सिलौटो रेष्टुरेन्टमा कडा विवाद भयो । आफूले विवाह गर्न लागेको प्रेमिका पूजा विश्वकर्मासहित इन्टरभ्यू दिन आएका विनयले मदिरा पिएर आएको
December 25, 2020 admin समाचार 1693
November 2, 2020 admin समाचार 7801
भगवान शिवले बनाएको एउटा अनौठो गुफा र त्यसबारे बारे कैयौ मान्यता प्रचलित छन् । भनिन्छ कि, जसले यो गुफाको सुरुङभित्र जाने कोसिस गर्यो त्यो व्यक्ति फर्केर आउन सकेको छैन । भारतको जम्मु कास्मिरबाट लगभग १४०